Service - Ningbo enweghị Magnetik Co., Ltd
Ahịa gbakwasara ọrụ dịkwuo uru nke ngwaahịa!
Service bụ mgbọrọgwụ nke enweghị mmepe. Anyị ahịa echiche na-eguzo na ndị ahịa anyị n'agbanyeghị ọnọdụ ahụ. Anyị ga na-ekpe ikpe na anyị ịrụ ọrụ na otú anyị ka afọ ju anyị ahịa 'mkpa na-eduzi na nkwenkwe na ahịa anyị ga-emecha chọpụta ihe ịga nke ọma anyị na-ga-adị.
Mgbe ahịa ọrụ:
The Sales ga-agwa ndị ahịa n'ime 24 awa mgbe nnyefe;
The Sales ga na-afọ ojuju nchoputa nke ndị ahịa na oge, na-enyocha ma chịkọta ahịa 'chọrọ na ahịa nwere iwu;
The Sales ga apụ ka nzaghachi ka Quality Department na ede ozugbo anata ahịa 'mkpesa banyere ngwaahịa. Mgbe ahụ Quality Department ga-eme ka analysis, na-edozi omume, Chọpụta na emere ebere mmejuputa mmetụta na n'ikpeazụ-agwa ndị na-arụpụta na Sales. The Sales ga-eziga ndị a metụtara akwụkwọ na analysis ahịa ka ha na afọ ojuju na nkwenye;
Anyị nwere ike inye dị iche iche njem: Site Air, Site Sea, TNT / DHL / gbasie / FedEx Express wdg
Engineering imewe na oru ngwọta:
Anyị nwere ike ike na teknuzu ngwọta karịsịa Engineering na Kere. Anyị na-kwara na emebe na-emepe emepe na ọrụ na-aga n'ihu mma. Anyị engineering mkpara nwere ihe afọ ahụmahụ na magnet n'ichepụta, ule, àgwà obi ike.